I-Miniature Husky: Okufanele Ukwazi Ngama-Husky Ama-Mini - Izinhlobo
I-Miniature Husky: Okufanele Ukwazi Ngama-Husky Ama-Mini
AmaSkyies aseSiberia ngokuvamile aziwa njengezinja ezinkulu, kodwa wake wayibona encane?
I-Miniature Husky ilungile njengoHusky waseSiberia ngaphandle kokuncanyana.
Le nja encane enesihlibhi ingaba ncane kodwa inabo bonke ubuntu obukhulu bukaHusky. Ama-Huskies athembeke kakhulu, ahlekisa futhi aqondise umndeni - i-Miniature Husky ayihlukile.
Uma ufuna konke ukujabulisa uHusky osayizi ogcwele kepha ungakwazi ukuzibophezela enjeni enkulu iMini Husky ingaba yinja ephelele.
Ingabe ukulungele ukwamukela lo mngani omusha ovela enyakatho ekhaya lakho?
Qhubeka ufunde ukuze uthole konke odinga ukukwazi ngale nja ...
I-Husky Encane Ngokubheka
Ukubuka konke kwe-Husky
Ibiza malini i-Huskyan Huskyan Husky Cost?
Ukubukeka okuncane kwe-Husky
Umhlahlandlela Wokunakekelwa Kwe-Husky Encane
Ungayiqeqesha Kanjani I-Mini Husky
I-Miniature Husky inayo yonke into emnandi ye-Husky yaseSiberia ngosayizi omncane futhi olula.
Le yinja esebenzayo kakhulu enomuzwa ongagugi wokuthembeka emndenini wayo. Usayizi wabo ukuphela kwento ebenza bahluke kunalokho uHusky ojwayelekile waseSiberia . Ungalindela i-pooch eqinile enamandla futhi enamandla esebenza kakhulu ngaphandle futhi echitha isikhathi sabo esiningi isebenza.
Ukuthandwa: # 14.
Isisindo: Amakhilogremu angama-20-35.
Intengo: $ 1500- $ 2500.
Ubuntu: Komphakathi, uthembekile futhi uyasebenza.
I-Alaskan Klee Kai
Intengo : $ 1500- $ 3000
Isikhathi sokuphila : Iminyaka engu-12-16
Usayizi : 8-23 amakhilogremu
Intengo : $ 2500- $ 5000
Isikhathi sokuphila : Iminyaka engu-13-15
Usayizi : 10-35 amakhilogremu
Umsebenzi : Phezulu
Intengo : $ 1500- $ 2500
Isikhathi sokuphila : Iminyaka engu-12-14
Usayizi : 20-35 amakhilogremu
Chitha : Ephakathi-Esindayo
IHusky Encane imane nje iyiHusky encane yaseSiberia.
Zenziwa ngokukhetha nokubhanqa imisele kadoti.
Njengabalingani babo abakhulu bahlukaniswa njengenja esebenzayo . Lokhu kusho ukuthi bayakwazi ukuthwala imithwalo emincane futhi elula uma behlala ngokushesha ezinyaweni zabo.
Uma ubheka le nja kufana nokuthi othile ufake i-Husky yaseSiberia nge-shrink ray. Banobusawoti obufudumele kasawoti nopelepele, umsila omnandi osontekile namehlo aluhlaza okwesibhakabhaka.
Abantu abaningi abafuna ukwamukela i-Miniature Husky benza kanjalo ngoba abakwazi ukuphatha ubukhulu obugcwele (bangaba nendawo yokuhlala encane noma izingane ezincane ekhaya).
Ngoba banenhlalo enkulu benza ukukhetha okuhle emindenini
Ekugcineni khumbula nje ukuthi ziyisondlo esiphansi kune-Husky ephelele ngokugcwele basengaba nedlanzana kwesinye isikhathi.
Njengenja esebenzayo bafuna ukufakwa emsebenzini isikhathi sabo esiningi sokuvuka.
Ivumelana nezimo kakhulu kune-Husky ejwayelekile.
Kushesha kakhulu futhi kukhanya ezinyaweni zabo.
Kungasiza ukuthwala izinyanda ezincane nemithwalo elula.
Kungaba nenkani kakhulu kwesinye isikhathi.
Izidingo zokugcinwa zisebenza isikhathi esiningi sosuku.
Waziwa ngokubaleka nokubaleka.
Kuzocekela phansi lapho kukhuthazwa.
Ekuseni uzovuka neMini Husky yakho isongwe ngaphansi kombhede wakho. Uma usuvukile kuzothatha isikhathi ngaphambi kokuba umngani wakho onoboya anqume ukuvuka nawe.
Ngemuva kokukhuthaza kancane i-pooch yakho izobe isilungele ukuqala usuku nawe. Ngemuva kokudla kwasekuseni bazolangazelela ukuhamba noma bagijime bezungeza indawo yangakini.
Uma sekuyisikhathi sokuthi uye emsebenzini bazophumula ekhreyithini labo futhi balindele ukubuya kwakho - kuzodingeka uqiniseke ukuthi banamathoyizi amaningi okuhlala bekhuthazekile ngaphakathi kwekesi.
Umsindo wemoto yakho ongena emgwaqeni uzobathumela begijimela umnyango!
Lindela ukushawa kwemidlwane lapho ufika ekhaya.
Ngemuva kokudla kwakusihlwa uhambo oluya epaki ukuyodlala nabangani abathile luzokhipha wonke amandla abo. Ungadlala futhi umdlalo wokubamba futhi uzibuke zigijimela ukuxosha ibhola.
Uma sekuyisikhathi sokubuyela ekhaya nobabili nobhoko lwakho nizokhathala nonke. Nobabili ningahlala phansi isikhathi esifushane sokugona. Manje yisikhathi sokulala i-Miniature Husky yakho izofuna indawo eyithandayo yokuphumula - unyawo lombhede wakho!
Banike ngokwanga ubusuku obuhle bese ulungela olunye usuku lokuzijabulisa kusasa.
Njengoba igama labo lisikisela ukuthi uHusky waseSiberia uvela eSiberia.
Ekuqaleni bazalwa yisizwe samaChukchi esiyimizulane ezinkulungwaneni zeminyaka edlule.
AmaSled ayengamaChukchi indlela eyinhloko yokuhamba ukunqamula indawo eneqhwa. Ngakho-ke amaHuskies azalelwa ukuthwala lezi zihlibhi ehlane eliqandisiwe.
Le nja emnandi futhi enobungani nayo ibisebenza njengomlingani phakathi nezinsuku ezinde nezinzima emakhazeni. Bebegudla kubaninizo ukuze bathole imfudumalo futhi baduduze izingane zaseChukchi.
Ngo-1908 lolu hlobo lwethulwa e-Alaska futhi lusetshenziselwa ukusiza ngesikhathi seGold Rush. Yathola ukuqashelwa kweAmerican Kennel Club ngo-1930 futhi iklabhu yabo yokuzala yasungulwa ngo-1938.
Ukuhluka okuncane kusesisha kakhulu.
Zivele kuphela ekuthomeni kweminyaka yama-1990s begodu zaqala ukufuywa nguBree Normandin.
Abafuyi beCopycat baqala ukuvela ngawo-2000.
Manje kunezindawo eziningi zokuzitholela iMini Husky yakho.
Uhlobo luhlala luyindlela enhle kulabo abangenayo indawo eyanele yeSiberia egcwele ngokugcwele.
6 Amaqiniso Okuzijabulisa
I-Miniature Husky yaqala ukukhuliswa ekuqaleni kwawo-1990 futhi nanamuhla kunedlanzana kuphela labazalanisi e-US.
Lezi zinja zibukeka njengezimpisi ezincane kodwa zinjalo akusekho okuhlobene nezimpisi ukwedlula noma yiluphi olunye uhlobo lwenja.
Ngaphezu kwe-Husky encane ungathola futhi i-Alaskan Klee Kai kanye nePomsky (womabili athengiswa njengamaHusky amancane kodwa ayizinhlobo ezahlukahlukene).
Ama-Mini Huskies alula futhi ashesha ukwedlula ozakwabo abagcwele. Bayashesha kakhulu futhi bangama-superstars eqiniso enkambweni yezithiyo.
AmaHuskies okuqala aseSiberia akhuliswa yisizwe samaChukchi esihambahamba futhi asetshenziselwa ukudonsa izihlibhi ngaphesheya kwetundra yaseSiberia.
Lolu hlobo lunye lwabaculi abaphunyuka kakhulu emhlabeni. IHusky yanoma iluphi usayizi idinga uthango olude futhi oluqinile olungakwazi ukweqa phezu kwalo noma ukumba ngaphansi kwalo.
I-Miniature Husky ipakisha konke ukwethembeka kohlobo nobuntu obunothando bube yiphakethe elincane.
Lapho nje bengena ekhaya lakho bazoziqinisa njengelungu lomndeni wakho!
Lolu hlobo lwenza inja yomndeni ibe yinhle njengozakwabo ojwayelekile. Izingane ezincane zizothanda umdlwane odlalayo ongakhuli ngokweqiniso futhi i-pooch izosheshe ifunde ukwamukela wonke umuntu njengengxenye yephakethe layo.
Ngenkathi izinja eziningi ezincane sezijwayele impilo yasendlini lolu hlobo luyinja engaphandle kakhulu.
Inamandla amaningi edinga indawo ephephile ukuyikhipha.
Lokhu akusiyo inhlobo efanele yamazambane asembhedeni njengoba kumele abe ezinyaweni zawo isikhathi esiningi sokuvuka kwawo. Futhi uma zinganakwa ngokushesha ziphenduka ezonakalisayo.
Abazona izinja zethanga kodwa ngokuvamile banothando kakhulu kunezinye izinja ezisebenzayo.
Lindela ukuqabulwa kwenja eningi ye-slobbery kusuka kule pooch encane ethandekayo.
Ungavumeli ubukhulu babo bukukhohlise.
Laba bantu abasebenza kanzima kakhulu bakwazi ngokuphelele ukusiza endlini. Ungakwazi nokubaqeqesha ukudonsa inqola encane noma ukuhudula inqwaba yezinti.
Kungakhathalekile ukuthi bangakanani usayizi wonke amaHusky aziwa ngokubhonga kwabo .
Kungenzeka ukuthi uzwe ukukhala lapho benesithukuthezi noma bezizwa benenkani. Lindela izikhalazo ezimbalwa lapha nalaphaya lapho inja yakho isesimweni sengqondo. Khumbula nje ukuthi ungayifakazeli inja enomsindo lapho ikhonkotha ukuze unakwe.
Esikhathini esiningi noma kunjalo i-pooch yakho izothula kakhulu futhi iziphathe kahle.
Le yinja egxile kakhulu kwezenhlalo nezomndeni enobudlelwano bemvelo babantu. Izingane zabo bonke ubudala zizoyithanda le pup futhi ingane izobathanda futhi.
Bazokwamukela ngothando noma yiliphi ilungu lepakethe elisha ngemilenze emibili noma emine!
Ukuba nale nja akulula ngaso sonke isikhathi.
Bangaba ngabavivinywa kakhulu kwesinye isikhathi futhi bangazama nokuzisho njengomholi wepakethe.
Ungahle ungene ezingxabanweni ezimbalwa nomngani wakho onoboya ngezikhathi ezithile kepha zizohlala zivela njalo.
Ngeshwa lezi zidlwane ezincane azizi ezishibhile.
Ukukhiqiza iHusky encane kunzima futhi lokhu kuzobonakala ngentengo yomdlwane. Futhi le midlwane ifunwa kakhulu!
I-puppy imvamisa izokubiza noma kuphi kusuka ku- $ 1500- $ 2000.
Kodwa-ke imidlwane ethile evela kolayini bombukiso ingabiza kuze kufike ku- $ 2500.
Uma ungenalo lolu hlobo lwesabelomali ungacabanga ukuthi usamukele endaweni yokukhosela - kepha lokhu akuyona inhlobo yokukhosela ejwayelekile. Uma ukwazi ukuyithola endaweni yokukhosela uzokhokha cishe u- $ 350 ngezimali zokutholwa.
Umdlwane $ 1500- $ 2500
Umuntu omdala $ 1200- $ 2000
Ukutholwa $ 250- $ 350
I-Miniature Husky iwuhlobo lokunethezeka ngakho-ke izobiza kakhulu kunezinye izinhlobo zezinja laphaya. Kufanele ubeke eceleni isabelomali okungenani esingu- $ 1500 sale njana.
I-Alaskan Klee Kais zivame ukuthengiswa njengama-Miniature Huskies. Kodwa-ke lena yinja ehluke kakhulu enezimpawu zobuntu nezokunakekela ezehlukile.
Uzodinga amathoyizi amaningi angaphakathi nangaphandle ukuze ugcine le nja enamandla inenjabulo.
Lolu hlobo ludinga ukuzibandakanya okuningi futhi lokhu kufaka isikhathi enkulisa ye-puppy nase-doggie daycare. Lezi zinsizakalo zivame ukukhokhiswa ngehora futhi zingasebenza okungenani ama- $ 25- $ 40 ngosuku.
Uma ungathengi i-pup yakho kumfuyi osemthethweni weMini Husky ngakho-ke kufanele ubheke kozalo lwenja yakho ukuze uqiniseke ukuthi uyakuthola okukhokhelayo.
Ngeshwa njengoba lolu hlobo luthandwa kakhulu kunemikhonyovu eminingi laphaya. Abanye abalimi bazozama ukuthengisa iPomskies noma ezinye nzalo njenge-Miniature Huskies. Kodwa-ke lezi nzalo zizoba namandla ahluke kakhulu kunamaHuskies amsulwa.
Ungalindela ukuthi lolu hlobo lubukeke ngqo njengoHusky waseSiberia - zincane nje.
Akufanele zikhule ngaphezu kwamasentimitha ayi-17 ubude.
Isici sabo esichazayo ngamehlo abo aluhlaza okwesibhakabhaka. Kodwa-ke kwesinye isikhathi amehlo abo angaba mnyama noma abe nsundu nge-hazel - i-heterochromia nayo kuvame ngokumangazayo kulolu hlobo.
Ama-Mini Huskies anesifonyo esibanzi ngamakhala amnyama noma ansundu nezindlebe eziqonde ngokuphelele.
Imidlwane emincane ingahle ibe nezindlebe eziyindilinga ezikhomba phezulu lapho zikhula.
Umdlwane wakho uzoba nomsila obabazekayo wesikela.
Le nja incane ngokwanele ukuba ibe yinja yethanga kepha isenkulu ngokwanele ukwenza umsebenzi owenzelwa yona.
Abesilisa bazoma phakathi kwamasentimitha angu-14-17 bese benesisindo esingamakhilogremu angama-25-35.
Abesifazane bazoma phakathi kwamasentimitha ayi-13-16 bese benesisindo esingamakhilogremu angama-20-30.
Lolu hlobo lunoboya obuphindiwe obuphakathi nendawo obuyisivikelo esimweni sezulu esibandayo.
Okumnyama nokumhlophe, noma usawoti kanye nopelepele yimibala yoboya ethandwa kakhulu.
Ungathola futhi ama-Miniature Huskies ngemibala yesiliva noma ye-sable.
Isifihla-buso esinombala omnyama ngokumelene nesifonyo esimhlophe ukubukeka okuvame kakhulu kwale pooch enhle.
Njengomlingani wabo omkhulu le nja encane ingumchithi onzima kakhulu - uzodinga ukuyixubha okungenani kabili ngeviki.
I-Miniature Husky ingumngane omncane omnandi wokuba naye kodwa bangaba yidlanzana lokugcina bajabule.
Ngenkathi benobungani bokuqala kakhulu kunezinhlobonhlobo ezijwayelekile basadinga ukunakekelwa okuningi. Le pooch idinga ukuzivocavoca umzimba futhi umnikazi wabo kufanele azimisele ukwehla kusofa adlale.
Akuyona inja engalindelwa ukuthi izihlekise yodwa.
Ijazi labo elibushelelezi lizodinga nokuzilungisa njalo.
Le nja encane izodinga okungenani imizuzu engama-90 yokuzivocavoca nsuku zonke.
Ungakwenza konke lokhu ngasikhathi sinye noma ukuhlukanise usuku lonke. Ungathatha i-pup yakho igijime noma igijime nawe noma ibophe iqhwa lakho ebhayisikilini lakho njengoba ugibela.
Khumbula nje ukuthi le nja ingumculi omuhle kakhulu wokuphunyuka kufanele bahlale ku-leash noma bedlala ngemuva kwendlu.
Ngemuva kokuhamba kwabo kufanele ubanike nesikhathi esivamile sokudlala.
Lokhu kufaka phakathi ukugijima nokugxuma, imidlalo yokubamba, ama-brainteasers nezifundo zezithiyo. Amathoyizi ahambisa imishini nawo anganikeza amahora wokuzijabulisa.
Vele ngesikhathi sakho sasebusika inja yakho izothanda ukudlala eqhweni. Ungase ukwazi ngisho nokubenza badonse isihlibhi sakho (njengoba nje okhokho babo bebengenza).
Ingqikithi Yomsebenzi Wansuku zonke: Imizuzu engu-90 +.
Izinga lomsebenzi: 5/5.
Umsebenzi owuthandayo: Ukudlala eqhweni.
I-Miniature Husky ingumchithi omkhulu kakhulu.
Lezi zinja zichitha kaningi ukuze zigcine ijazi lazo lonyaka.
Shayela i-pooch yakho kabili ngesonto ngamabhulashi nakuma-combs enzelwe ukufinyelela zombili izingqimba zejazi.
Lapho inja yakho ishaya ijazi layo entwasahlobo futhi iwa kuzofanela uyihlikihle nsuku zonke.
Hlola izinzipho zenja yakho njalo emavikini amabili. Kungenzeka ukuthi bazigqoke njengoba begijima futhi bedlala kodwa izinzipho zabo kumele zigundiwe uma beqala ukugoqana.
Ekugcineni qiniseka ukuthi ugcina izindlebe zihlanzekile futhi zomile ukuvikela ukutheleleka.
Le nja akufanele iphakelwe ukudla okujwayelekile okuncane kohlobo.
Izinga lomsebenzi wabo ophakeme lisho ukuthi kufanele badle okuncane kuphela kunenja egcwele ngokugcwele.
Ziphakele izinkomishi ezi-2 zekhwalithi ephezulu eyenzelwe izinja ezisebenzayo. Banikeze inkomishi eyodwa ekuseni yokudla kwasekuseni nenkomishi eyodwa kusihlwa ngesikhathi sokudla.
Izinja zamandla aphezulu zingakwazi unama-carbohydrate amaningi kunezinye izinhlobo eziningi. Vele uqiniseke ukuthi lawa ma-carbs avela emithonjeni yemvelo enempilo njenge-oats nemifino. Amaprotheni yisithako sesibili ekudleni okunempilo kwale nja. Kufanele ivele emithonjeni yenyama yangempela futhi ingalokothi yenziwe ngemikhiqizo noma ngokugcwalisa.
Hlela ama-calories aphakathi kuka-800 no-1000 ngosuku.
Phakathi kwamasonto ayisishiyagalombili kuya kwayi-12 yobudala i-Husky yakho Encane izokala phakathi kwamakhilogremu angu-5-10. Abesifazane bazoba semaphethelweni aphansi aleli banga lesisindo.
Ku- ukuphela kwezinyanga eziyi-6 Abesifazane bazoba phakathi kwamakhilogremu angu-13-15 nabesilisa abanesisindo esingamakhilogremu ayi-16-18.
Ngosuku lwabo lokuzalwa lokuqala inja yakho kufanele ibe nesisindo esiphakathi kwamakhilogremu ayi-18-25. Bazofinyelela isisindo sabo esigcwele samakhilogremu angama-20-35 lapho sebenezinyanga eziyi-16 ubudala.
Sekukonke lolu luhlobo olunempilo kakhulu kodwa-ke amehlo abo aluhlaza okwesibhakabhaka aziwa ngokuhlangabezana nezinkinga.
I-cataract yiyona nkinga ejwayelekile yezempilo ngalolu hlobo. Kungadala ubumpumputhe uma bengalashwa futhi imvamisa kwenzeka kuphela ngaphambi kokuba inja ineminyaka emihlanu - ngakho-ke qiniseka ukuthi uyakhanya behlola amehlo abo .
Noma ikuphi ukusibekela esweni lenja yakho kuyimbangela yokuvakashelwa udokotela wezilwane.
I-atrophy eqhubekayo ye-retina isifo esibi kakhulu. Kungukuwohloka kwe-retina okugcina kuholele ekungaboni ngokuphelele.
Kwesinye isikhathi umusi wobisi esweni lenja yakho uzokwazisa ukuthi kukhona okungahambi kahle. Kepha kaningi isimo asinazo izimpawu nhlobo kuze kube yilapho kuqala ukukhubazeka kombono.
Ngeshwa akukho ukwelashwa noma ukwelashwa kwalesi simo futhi izinja kuzodingeka zivumelane nempilo ngaphandle kokubona kwazo.
Ingabe I-Husky Encane Ihlala Isikhathi Eside Kangakanani?
Ungalindela ukuthi babe nesikhathi sokuphila esifanayo nozakwabo ogcwele ngokuphelele.
UHusky omncane uzophila aze abe neminyaka eyi-12-14.
Ukuqeqesha le nja kungaba yinselele impela.
Abafuni njalo ukuqeqeshwa futhi bazokhuluma kakhulu uma bengekho esimeni semizwa.
Kufanele uzame ukwenza ukuqeqeshwa kujabulise ngazo zonke izinhlobo zemidlalo yasendlini nezifundo. Sebenzisa amakhono obuchule bemvelo yenja yakho bese usetha eyakho imbukiso yenja egcekeni.
Siza umdlwane wakho uzulazule kule nkambo futhi ufihle ukuphatha kwabo okuthandayo namathoyizi ukuze ubanikeze ugqozi. Setha inkambo entsha isikhathi ngasinye ukuze inja yakho ingazi ukuthi ilindeleni.
Ngenkathi uziqeqesha kufanele uqine kepha ungalokothi uqine.
Inja yakho idinga ukufunda ukukuhlonipha futhi izokwenza lokho kuphela uma ukhombisa ukuthi uyayihlonipha.
Khombisa inja yakho inhlonipho ethile ngokuyincoma ngokuziphatha kwayo okuhle futhi ungayeki lapho iziphatha kabi. Bazofunda ukuthi yini abangakwazi futhi abangakwazi ukuyithola ngokushesha ngokwanele.
Khumbula nje ukuthi lena yinja yenhlalo.
Ukuzihlanganisa nabantu abampofu kungenye ye- izimbangela ezivame kakhulu zokuziphatha okubi .
Izinkulisa zezinjana nezinsizakalo zezinja zezinja zinhle kakhulu kulolu hlobo. Lapho bazokwazi ukwenza abangane abasha ngenkathi bezijwayeza imikhuba emihle kakhulu.
Ama-Husky amancane kufanele abeke izingqondo nemizimba yawo ukusebenza ngaso sonke isikhathi.
Ungaguqula ukuqeqeshwa kube ngumsebenzi futhi ubanikeze umsebenzi olula wokwenza endlini.
I-Miniature Husky iyi-Husky yaseSiberia eyi-pure encane ngobukhulu.
Njengoba zincane kakhulu zingaphansi kwesondlo futhi zingangena emafulethini nasemakhaya amancane.
Le pooch ilungele noma ngubani ofuna iHusky kepha akakwazi ukugcina usayizi ogcwele.
Basenenhlalo efanayo yenhlalo, ukudlala nokwethembeka kokhokho babo abagcwele ngokugcwele.
Lezi zinja zithanda nje ukusebenza nokudlala - zizothanda ukusiza ukusiza endlini. Ukuzinikela kwabo emindenini yabo kungenye nje yezinto eziningi ezibenza bakhetheke.
Mane ukhumbule ukuthi le nja ayisiyo-lap top toy.
Banamandla amaningi futhi bazofuna ukuba sezinyaweni zabo ngangokunokwenzeka.
Noma ngubani ofuna ukuthatha i-Miniature Husky kufanele alungele ngokuphelele i-Husky yaseSiberia kwiphakeji elincane.
Uma uzinika isikhathi sokuqonda kahle ukuthi le nja encane idinga ini uzozithola unomunye wabangane abakhulu emhlabeni wonke.
Sazise noma imiphi imibuzo yakho esigabeni sokuphawula ngezansi ...
Amagama Ezinja Zokuzingela: 475+ Amagama Okuzingela Ahle, Ahamba Phambili futhi Ahlukile
pitbull kanye rottweiler mix umdlwane
pitbull boxer mix umdlwane izithombe
amagama enja yentombazane yamalebhu kashokolethi